Daawo Muuqaal yaab leh”Dad caabudaya Doolliyo, iyagoo walibana sheegay in ay wax la cunaan, lana seexdaan, subxaanallaah! | kowtharmedia.com
Home MUUQAAL Daawo Muuqaal yaab leh”Dad caabudaya Doolliyo, iyagoo walibana sheegay in ay wax la cunaan, lana seexdaan, subxaanallaah!
Daawo Muuqaal yaab leh”Dad caabudaya Doolliyo, iyagoo walibana sheegay in ay wax la cunaan, lana seexdaan, subxaanallaah!
Soomaalida waxay tiraa “Nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban” taasi oo macnaheedu tahay maalin walibaa intaad dunidda ku nooshahay wax kaa yaabiyo ayaad arkaysaa, hadaba sidaan la socono dalka hindiya, waa dal aad u weyn waxaa kuwada nool dad kala diin ah, kala af ah, kala dhaqan duwan, xitaa si daran ugu kala tagay diimaha ay aamin san yihiin.
Hadaba Hindiya sidaan la socono waxaa ka jira diimo aanan laga aqoon dunidda kale, waxaad arkaysaa shucuub caabudaya Dooliyadda(Jiidh-ka) qaarna waxay caabudaan Lo’da, qaarna waxay caabudaan Qoraxda(cadceeda).
qaar Dadka lagubo ayay Caabudaan oo qofka kadhintay waa ay kariyaan ama cadaabaan.
Karne Mata waa macbad weyn oo ku yaala waqooyiga dalka Hinidya, waxay dadka macbadkaasi ku caabudaan dooliyadda ama Jiidhka, markii aad gasho waxaad ka naxeysaa tiradda dooliyadaasi, waxaa kaloo kaa yaabinaya sida ay meel waliba ugu saxaroonayaan, intaba badan dadka dalxiiska u yimaada halkaasi waxaa marka koowaad ay uriyaan kaadida dooliga iyo saxaradiisa oo meel waliba taala.
Hadaba yaanan warka idinka badine’ Jiidh-ka ku nool macbadkaasi waxay dadka u caabudaan sida Alle oo kale(subxaanah), waxayna ku quudiyaan halkaasi iyaga oo siiya raashin kala duwan.
Previous PostDowladda Burundi oo ku Hanjabtay in Ciidankeeda ay kala baxeyso Dalka Soomaaliya waa hadii..........! Next PostDAAWO Muuqaal: Soomaalia oo lagu soo bandhigay Ciidan badali lahaa AMISOM iyo Taliyaha Ciidanka xooga oo hadlay!!